🥇 ▷ Sidan ayaa ah sida loo isticmaalo Xbox One home screen ✅
Sidan ayaa ah sida loo isticmaalo Xbox One home screen
Sidaad ogtahay, adeegsadayaasha kujira barnaamijka ‘Xbox One Insider’ ayaa helay marin cusbooneysiin ah oo horseeday in la beddelo ‘madal-garaynta’ Xbox One ama bilawga. Sannadihii la soo dhaafay, illaa 2013 markii Xbox One uu ifka ifka qaatay, Microsoft waxay ka hirgelinaysay isbedelo muhiim ah aaggan. Wadada loo maro tusmada ayaa ahayd madax xanuun isku dayaya inuu ka jawaabo baahiyaha iyo baahiyaha bulshada. Isbeddel cusub ka dib, waan arki karnaa sida Xbox One home screen uu u baddalay
Isbeddello muhiim ah, halkaas oo ay isku dayeen inay ku dabaqaan isbeddelada nooc kasta leh iyada oo ujeedku yahay samaynta badhanka iyada oo loo marayo muuqaalka dareeraha badan. Si kastaba ha noqotee, shaashadda guriga had iyo jeer waa sheyga ugu horeeya ee la bixiyo oo badiyaa xulashooyinka badanaa lagu qaado. Xiriiriyaha ugu dambeeyay wuxuu durba muujiyey dabeecad wanaagsan oo ka soo gaabin jidadka iyo dhowr ficil oo ku saabsan maareynta dhammaan waxyaabaha ku jira. Xiriirkan cusub wuxuu umuuqdaa inuu si qoto dheer uga dheehan karo dhinacan.
Waxay ahayd bartilmaameedka Windows Central, Jez Corden, oo mas’uul ka ah diyaarinta shirkan. Waxaan horay u aragnay inuu yahay mid firfircoon shabakadaha markii uu ku dhawaaqay muuqaalka muuqaalka cusub ee ‘Xbox One interface’. Fiidiyowga, waxaa la soo jeedinayaa in lagu muujiyo sida shaashaddaan ‘Hbox One home screen’ ayaa isbeddelay, isaga oo siinaya aragtidiisa gaarka ah ee isbeddelada.
Iyada oo leh qaabeyn xoogaa ka duwan tii hore ee hore, waxaad arki kartaa in ay raadineysay marin u helis ka ballaaran dhinacyada sida Xbox Game Pass iyo Mixer. Markii hore, kuwani waxay ku yaalliin tab tab oo isku xiga, iyada oo aan laga soo qaadin shaashadda guriga. Waxaa si sax ah u ah cunsurkii ay umuuqdeen inay isku dayeen inay badalaan, sidaa darteed ka fogaadaan inay ku rogaan RB + LB inta udhaxeysa shaashadahan si aad ugu siiso sida fur fur deg deg ah ee talaabooyinka kooban.
Labaduba waxay galaangal u leeyihiin Xbox Game Pass, iyo Mixer, Iyaga ayaa hoos imanaya codsigii ugu dambeeyay ciyaarta. Qaybtaas, waxaan sidoo kale ka helnaa marin u hel dukaanka iyo asxaabta. Dhanka midig, waxaad arki kartaa marin u helka cayaaraha iyo qeybta codsiyada, oo ay ku xigto barnaamijyadii ugu dambeeyay-ciyaaraha, ayaa bilaabmay. Wax walbana way isku mid ahaayeen, laakiin waxay umuuqataa inay ka yar tahay muuqaal ahaan qaabdhismeedka haatan jira, halka ciyaarta ugu dambeysay ay ciyaareen waa halgamaa weyn inta soo hartayna waxay ugu laabteen qeybaha qaab taban, ama hoose.
Maxaad u aragtaa shaashaddaan cusub ee ‘Xbox One’? Kuwee kuwa ka fiicnaa?